Etu esi edozi mmejọ 4 Mobile Marketing na You're Na-eme | Martech Zone
Na nke a na-abịa Ahịa Technology Podcast, anyị na-ekwu n'ezie maka iji ụdị, njikarịcha ụdị, yana - n'ezie - ndị ukwu nọ naMpempe akwụkwọ bịara na mkparịta ụka ahụ! O doro anya, anyị na-atụle ya njikarịcha nke ụdị maka ngwaọrụ mkpanaka - usoro dị oke egwu.
Chris Lucas na ndi otu ndiMpempe akwụkwọ na nso nso a weputara ihe omuma a na edeputara Mmehie na-emekarị 4 nke ndị na-ere ahịa na-eme ma a bịa n'ahịa ahịa mkpanaka:
Mee atụmatụ ma soro ya - Ihe karịrị ọkara (62%) nke ndị ahịa ma enweghị atụmatụ azụmaahịa ọdịnaya, ma ọ bụ na enweghị ederede ederede ha. Naanị site na ịdekọ usoro gị, ohere ị ga-enwe ga-abawanye. Nke a bụ omume nke ndị niile nwere ọganiihu - ọ bụghị naanị ndị na-ere ahịa.
Adịla otu ịnyịnya - Ọ dị mfe ịrapara na njagharị ma nọgide na-elegharị anya ụzọ aghụghọ sirila ike nke rụpụtara nsonaazụ n'oge gara aga. Mana maka ndị na-ere ahịa na-aga nke ọma, ọnọdụ dị na mmalite. Ha nwere usoro aghụghọ karia aka ha. Dịka ọmụmaatụ, ị maara naanị 21% nke ndị na-ere ahịa B2B na-eji akwụkwọ ozi email? Nke a kwesiri ibu nkpuru osisi di ala maka otutu ndi ahia, mana onu ogugu gosiputara na obu ugbo ala nke adighi eji ya.
Nabata Infographic ahụ - Mmadu bu ihe siri ike ka ha buru ihe e kere eke: 90% nke ozi nke na-abata ụbụrụ na-abata site na akwara ngwa anya anyị, a na-arụkwa data ahụ ụzọ 60,000 ngwa ngwa karịa ozi ụbụrụ anyị na-enweta n'ụdị ederede. Nke ahụ pụtara na anyị bụ ebumnuche kachasị maka infographics.
Soro ndị isi - Ndị ahịa azụmaahịa na-aga nke ọma anaghị echere ka usoro kachasị ọhụrụ ịbịakwute ha - ha na-achọsi ọrụ omume kacha mma ike ma chọta ụzọ ha ga-esi jiri ha mee mkpọsa nke ha. Nke mbụ, gbaa mbọ hụ na ị bara n’ime. ụlọ ọrụ ozi ọma. Na-eso ụdịdị mmiri ozuzo na mgbasa ozi mgbasa ozi? You ma ndị ndị isi echiche nọ n’ohere gị? A obere onwe-akụziri onwe gị na-aga ogologo oge iji hụ na mgbalị ị na-ere ahịa na-eduga.
Mara: Anyị bụ ndị mmekọ nkeMpempe akwụkwọ !
Tags: android atụmatụmpempe akwụkwọinfographicatụmatụ iphoneMobile na Mbadamba ụrọahịa efummejọ nke ekwentị